Lapho nje lo "Shark umkhonyovu" emigwaqweni - kuba ngokuphelele ezinyantisayo zonke abedlula ngendlela. Akekho ongalindela ukuthi umngane imoto Russian kungakwenza imoto elikhulu kangaka. Kodwa abafowethu ababili Arsen Andranik Vartanova bona iphupho kwabaningi.
Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi ukumiswa kwehliswe yemoto. Bazalwane futhi akazange alindele ukuba siqhubeke tune imoto yabo kodwa usuqaliwe, uye wahluleka ukuyeka. Isinyathelo esilandelayo ekuguqulweni imoto banal emotweni yemidlalo uMnyango injini gumbi engangikulo. Ngokuphelele esikhundleni injini imboni entsha ngokwemvelo aspirated, 180 hp kanye ivolumu 1.7 amalitha, guys ushintshe umqondo ezifuywayo imoto umkhakha. Noma kunjalo, konke lokhu kwaba nje kuyisiqalo uhambo olude ukuthi Vaz 2108 "Black Shark" futhi anqobe namuhla.
Novelty, kwanqunywa ukuba zama ngokushesha kuleli cala. Futhi izinhlanga lokuqala "Vaz Black Shark" bathethelele utshalomali ngezikhwepha zakhe nezisetshenziswa. ofakazi abaningi lomcimbi ukuthi imoto Kulula ancintisane izimoto angaphandle. izikhathi ezingaphezu kuka-4 no-Arsen Andranik kwabonakala chassis. Khona-ke anda wheelbase ngu 12 cm. Khona-ke guys saqala ukucabanga mayelana nokusingatha imoto yakhe. Bavula underframe isakhiwo stiffen imoto.
A hlobo olusha "Shark Vaz" aluthola kancane kancane. Bazalwane phansi kophahla ngoba sporty kakhudlwana futhi ukunciphisa igebe phakathi jacket futhi ingilazi nobubanzi besandla. Ngokusho Mechanics, isithombe esisha yavela ngemva inhlangano ephelele ukumiswa kanye wheelbase. Ukuze uguqule i abavamile "Vaz 2108" ku "Shark" guys kwadingeka asebenze kanzima futhi izimali eziningi amandla abo, umcabango nemibono zokudala. Silungisa izingxenye, kwanqunywa ukuba enze fiberglass, ngoba Uhlonze lwalo akuyona ezingaphezu kuka-4 mm. Yekuchumana yohlobo esetshenziswa eziningi zalezi zinsuku uhlanga izimoto ukunciphisa isisindo imoto. Phezu kophahla evamile understating guys akuzange kubayekise. Futhi kwanqunywa ukwenza kube panorama. Ngakho kule lwasekhaya imoto umkhakha omunye muntu benza futhi abazalwane baba amaphayona kule endleleni. Lapho umsebenzi ophahleni seliphelile, imoto ilahlekelwe ngokuphelele yayo yasekuqaleni ukubukeka. Bobabili abazalwane baye abalandeli izimoto kanokusho yakwelinye izwe njalo. Ngakho-ke uma weza emnyango, omunye wabo ngokushesha ucabangeni "Lamborghini". Imidwebo imidwebo loops, zazo ogibele izimoto zabo izithombe zabo ezathathwa kwi-Inthanethi. Ngosizo umngane ukusebenza ngesikhathi ukukhiqizwa ithangi Vartanova uyakwazi bona futhi lo mbono uhlanya. Manje, lapho umzimba imoto yalungiswa, ke wakhishwa kusukela injini bese ithunyelwa umshini imidwebo.
Kuze kakhulu imoto elapha Umdwebo imisebenzi futhi yazuza ukubukeka umbukwane, hhayi abazalwane abazange balahlekelwe isikhathi ize. Ukuthatha out inhliziyo ezemidlalo imoto yakhe, amyisa Ochwepheshe owavele, sezisungule kuye turbocharged. Elinye iphuzu elibalulekile. Ibubulo elenziwe ngesimbi olunikezwe yi Greddy, nesamukeli esikhundleni SVR, 3.5 litre. Futhi wabeka pistons kokuzihlanganisa nama-rod yokuxhuma alula. Lapho beqeda umsebenzi ukwandisa umthamo yenjini, ngakho kwafika isikhathi ohlelweni indlu. Abazalwane babeka imithwalo uhlelo uwoyela abalandeli enamandla. Ngenxa zonke ngcono amandla ngokuzenzakalela linyuke laba ngu-250 hp Ngalesi sikhathi, umzimba "Vaz Shark" safike ezinemibala ngokugcwele, wayiswa izingane. Arsen Andranik futhi laqala ke injini nezingxenye entsha. Glass at 2110 "Shark" efakwe ngochwepheshe, ngoba uphahla ehliselwa nomumo zabo zibe eliphansi. Umsebenzi abayekanga, futhi uma umshini ibuyise kubafowabo, kwathiwa ngokushesha enophephela ebhokisini. Kwaba kukhona ukuthi wenza imisebenzi ku ukwahlukanisa umsindo futhi ukufakwa Dodger. Andranik futhi Arsène watimisela kuya ifektri, futhi iphaneli has izinzwa kuso ukubeka uhlelo imoto electronic. The elingaphakathi zasebukhosini esihlalweni Porche amafemu Kwamiswa. Basuke ifakwe i drive kagesi umklamo sporty ngokugcwele. Salon futhi namanje ku esiteji ukuthuthukiswa. Kodwa abazalwane athembisa ukujabulisa wonke umklamo angajwayelekile futhi amazwi abo akunakungatshazwa.
The guys wayenze umsebenzi cwe. Kusukela evamile "2108" abakwenzile eliyingqayizivele ngempela "Black Shark". Ngokushesha, abafowethu bahlela ukuqeda ukuthuthukiswa izimoto zayo. Futhi ake imoto endleleni Krasnodar esifundeni. Futhi ngeke iqhaza embukisweni kanye nasezindaweni izozama ukukhombisa "Shark" kuzo zonke izifunda of Russia. Iminyaka engaphezulu kwamashumi 3 kwathatha ukudala le wobuciko. Igama laqanjwa esekelwe zangaphandle uhlobo nolaka umshini. Kumelwe ukuba ngamunye abanikazi imoto ufuna ukuguqula yakho imoto bese uyinika i look wokuqala. Vartanova abazalwane bakwazi ukufeza cishe wonke amaphupho. izimoto zabo njengoba yenzile isikhangiso esihle kakhulu studio yakhe siqu, futhi manje akukho ukukhululwa amakhasimende. Okwamanje, "Shark Vaz" wavakashela amahlumela amaningana isithombe nokuthi nje ekuqaleni Star Trek. Manje umsebenzi waqala enye project ebizwa Restyling 918. The guys athembisa ukwenza kube njengoba nje emnandi.
Izikali electronic Outdoor: ukubuyekezwa. Top phansi izikali electronic
Heat ifilimu amawindi: izici